तपाईं स्क्विडबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? केहि सामरिक व्यञ्जनहरु
खाना र पिउने, पाक कला सुझावहरू
तपाईं स्क्विडबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? हो, वास्तवमा सबै कुरा, पहिलो व्यञ्जनको साथ सुरू गर्न, र यो समुद्री प्राणीको भरपूर वा पकाएको बास समाप्त हुन्छ। मुख्य कुरा यो तयार गर्न ठीक छ, किनकि असफल पकवान खान चाहँदैनन्!
स्किड (व्यंजनहरू) बाट डिश
उदाहरणका लागि, माछा त्रसित हुन सक्छ। ज्वरोमा एक सानो तेल पहिले, प्याज जोडेर आधा रिंगहरु र कटा चाइते मा कट। पहिलो घटकको सुनको रङको लागि पर्खनुहोस् र प्यानमा कटाई सिग्रिड (पङ्क्तिहरू) राख्नुहोस् । मसाले थप गर्नुहोस्, साथै पेस्ट (टमाटर) को चम्मच। केहि मिनेट को लागि स्टू र तपाईं चावल वा उबले आलु को उत्पादनको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं स्क्विडबाट के गर्न सक्नुहुन्छ?
असाधारण असामान्य डिश - यो समुद्री बासिन्दाहरूको कपालहरू छन्। आधा किलो किलोग्राम एक धोएमा र राम्रो भरी मासु चक्कु को माध्यम ले पारित गर्नुपर्छ। क्रीममा सेतो रोटीको केही स्लाइसहरू खान्नुहोस्, प्याज र प्याजको एक जोडा खोल्नुहोस्, अण्डा फोडा पार्नुहोस्। पूर्व-अवस्थित खनिज मासु सहित सबै अवयवहरू, फेरि पीस गर्ने उपकरण मार्फत पारित गरिन्छ। मसाले जोड्नुहोस्, साथसाथै (यदि चाहियो भने) - तपाईंको मनपर्ने जडी बूटी (दौड उपयुक्त छ)। अर्को, तपाईंलाई थोडा थकित ब्रेडक्रम्ब र केही चम्मचको चम्मच मिश्रण गर्न आवश्यक छ, गीला हातले बनाएको गीला कपालहरूमा लुगा लगाएर, र त्यसपछि तिनीहरूलाई हट पानामा पठाउनुहोस्। जब कलेटहरू फ्राइड गरिन्छ, तिनीहरू कुनै पनि चटका साथ सान्त्वना गर्न सकिन्छ। उबलिएको croutons वा पास्ता संग सेवा गर्नुहोस्।
भरपूर शंकुहरू अनुभवी गृहिणीहरूका लागि, वास्तविक खोज स्क्विड बर्तन हो। तस्विरहरु संग व्यञ्जनहरु सबै ठाउँमा भेट्टाउन सकिन्छ। हामी भरिएका समुद्री बासिन्दाहरूलाई तयार पार्छौं। त्यसोभए, आवश्यक शव्दहरू लिनुहोस्, सावधानीपूर्वक तिनीहरूलाई धोएर तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई नमकमा नमक गर्नुहोस् र केहि मिनेटको लागी छोडिदिनुहोस्। बीचमा, गोभी गोभी, गाजर र प्याज। लुगा लगाउनुहोस् र कुखुराहरू काट्नुहोस्। टमाटर पेस्टको साथमा उत्पादहरू तान्नुहोस्। त्यसपछि सामानहरू स्क्वाड्स र किनारहरू बन्द गर्दछन् ताकि भरपर्दैन। एक टुक्रा बेकिंग पानामा फैलिनुहोस्, प्रत्येक गाजरमा सानो मेयोनेज थप गर्नुहोस्, र त्यसपछि 15 मिनेटको लागि पकाउन छोड्नुहोस्। पानामा सानो पानी थप्न नबिर्सनुहोस् (अन्यथा पकवान धेरै सुत्ने हुनेछ)।
पहिलो को लागि तपाईं squids देखि पकड सकते हो? रात्रिको लागि अद्भुत गर्म व्यंजन सूप शुद्ध छ। यो यसको स्थिरताको कारण पेटको लागि धेरै उपयोगी छ, र शरीरको लागि कम्तीमा पनि महत्त्वपूर्ण छैन (विभिन्न भिटामिनको अभावको कारण र सामग्रीहरूमा पाइने तत्वहरू ट्रेस)। सानो काँटा कालीफ्लोर धोएं, यसलाई फ्लोरोसेन्समा लुकाउनुहोस्। गाजर र प्याज छील गर्नुहोस्, चार भागहरू दुवै घटकहरूमा काट्नुहोस्। सबै सससैपमा राख्नुहोस् र यसलाई पानीको साथमा राख्नुहोस् ताकि यो सब्जियां मात्र छोडिन्छ। 35-40 मिनेटको अवयव अवशोषण गर्नुहोस्, भाइरसलाई अर्को कन्टेनरमा राख्नुहोस्। सब्जियों एक मासु चक्कु को माध्यम ले गुजरें या ब्लेंडर को चिपकाएँ। आधा प्याला क्रीम जोड्नुहोस् र सब्जियों को शोर (यसमा डिश को वांछित घनत्व) जोड्नुहोस्। स्क्वाड धोएको हुनुपर्दछ र काट्नुहोस् (यदि वांछित भएमा, उनी पूर्व-फ्राइड हुन सक्छन्), र त्यसपछि सूपमा राख्छन्। तिनीहरूलाई केही मिनेट मात्र फोच गर्न आवश्यक छ। पहिलो डिश सजाउनुहोस् राम्रो तरिकाले सुकेको प्याजको साग र झन्डा हुन सक्छ।
यी व्यञ्जनहरु को अतिरिक्त, तपाईं अझै पनि बल्लेबाज या ग्रिल मा कैरियर बना सकते हो, र तपाईं गहिरो फ्राइंगिंग को छल्ले को जगा सकते हो। कुनै पनि अवस्थामा, स्क्विडबाट पकाउन सकिन्छ कि बारेमा प्रश्नको जवाफ फेला पर्यो।
भविष्यको प्रयोगको लागि मशरूम कसरी स्टोर गर्ने? फ्रिज गर्नुहोस्!
कद्दी फ्राइड, भाप, उबले ...
जिलेटिन खाना र खाना पकाउने यसको प्रयोग
गिब्सबाट चिकन सूप पकाउने?
कसरी दूध र तर बोतलको लागि पानीमा तरल मंगालाई वेल्ड गर्ने?
परमाणु घडियां: इतिहास र modernity
अचम्मको गुण टंकशाला
के पतिले धोका सपना? आफ्नै विश्वासघात?
आफ्नै हातमा कसरी जम्मा गर्न आस्टसीलस्कप
संरचना, संरचना, संस्था को सिद्धान्त र इकोसिस्टमका गुण
आफ्नै हातले सजावटी पानी मिल
"Koktem" (अल्माटी, रिसोर्ट): बाँकी र उपचार
Malathion bedbugs: प्रयोगको लागि सुझाव
व्लादिमीर Kramnik: जीवनी र जीवनको रोचक तथ्य
"एन्ड्रोइड" को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू। Android को लागि सबै भन्दा आवश्यक कार्यक्रम
सुविधाहरू र क्रोनिक appendicitis को विशेषताहरु